Thenga i-4-DHEA powder (571-44-8) hplc =98% | AASraw prohormone
/ iimveliso / Prohormone / 4-DHEA powder (571-44-8)
Akukho kalo SKU: 571-44-8. Udidi: Prohormone
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-4-DHEA powder (571-44-8), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Xa ufuna ukunyusa amandla kunye nemisipha yezempilo, iprohormones efana 4-DHEA powder yindlela enye yokuzuza kwi-optimal health and muscle performance. I-4-DHEA iyiprohormone ekhuthaza ukugcinwa kwe-nitrogen, amandla kunye nomthamo wegazi ukuhamba kwi-muscle. Ukongeza i-4-DHEA kwinkqubo yokuqeqesha amandla kunye nokwakha umzimba kunye neziphumo ezimangalisayo kunye nemiphumo emibini.
4-DHEA powder Abalinganiswa basisiseko
Amagama ekhemikhali: 4-DHEA powder
Amanye amagama: 4-Dehydroepiandrosterone, 4-DHEA powder, 571-44-8
I-5-DHEA iyiprohormone eyenza umsebenzi onobuchopho kwaye inokubuyisela amanqanaba e-DHEA emzimbeni. Ihlala ingasebenzi kuze kubekho iinkqubo ezibangelwa ngexesha elifanelekileyo. I-hormone i-DHEA eveliswa yi-grenal adrenal, kodwa ingqondo iyenza nayo. I-DHEA ivumela imveliso ye-androgens kunye ne-estrogen, enenzuzo enqwenelekayo yilabo abafuna ukwandisa ubungakanani bemisipha kunye nempilo ye-muscle. Njengoko umzimba udala, ukuveliswa kweDHEA emzimbeni kunciphisa. Ukunciphisa i-DHEA emzimbeni kubangela ukukhathazeka kwe-hormonal, umsebenzi ophantsi wezesondo kunye ne-osteoporosis.
I-4-DHEA powder yiprohormone efana ne-DHEA yemvelo emzimbeni. Iinzuzo zokudibanisa i-4-DHEA powder kwisicwangciso sakho sempilo kunye nesistim se-muscle sininzi.
Imiphumo ephantsi ye-estrogenic ixhomekeke kwi-anabolic steroids. Iziphumo zecala ye-Estrogenic zibandakanya iinwele zobuso ezandisiweyo, ezincinci kumadoda, ezincinci zesisu kwizintombikazi, iinwele zobuso kubasetyhini, iimvavanyo ezincinci kumadoda kunye nokuxinezeleka. I-4-DHEA powder ayinayo imiphumo efanayo. Iziphumo zecala le-Estrogenic ziyayiphendula, ngoko ke ziphumo ze-estrogen.
Ukufumana iMisa ngokunyuka kwe-nitrogen kwi-muscle
Ukugcinwa kwekhalori ejoliswe ekujoliswe kuyo ukukhwabanisa okuphezulu
Ukuphucula umzimba womsebenzi
Ukuphelelwa kancinci kwexesha lokuphumula komzimba.
Imiphumo efanayo yemisipha kunye neziphumo ezingekho zonyango
Ukunyuswa koMgangatho kwiGym
Ukwandisa iMistic Mass Mass
Ayikho Isondlo esinobungozi
I-4-DHEA powder yiyo ifuna ukulungelelanisa ukukhuthaza ubunzima be-muscle, ungayinciphisi. Thetha kwingcali yezempilo malunga neendlela onokuzongezwa ngazo ukuhlangabezana neemfuno zakho. Kubalulekile ukufaka i-4-DHEA powder kunye nenkxaso yempikiswano kunye neyonyango yokuhamba kwithuba. Kwakhona kulula ukuthabatha i-4-DHEA kwifowuni kwifomu yepilisi ukwenzela ukunciphisa iindleko kunye neemfuno zeeritha. I-4-DHEA powder iyinhlanganisela yomlomo ephezulu kakhulu kwaye ingafakwa emzimbeni ngokukhawuleza ngokusebenzisa iifomsile zethu zeLiposomal.
Iyiphi inqanaba le-4-DHEA powder
I-4-Androsterone yi-anabolic enamandla emanzi, eguqukayo kwi-testosterone ngokuguqulwa kwamanyathelo amabini kwi-absorption. Iprohormone engenayo i-nonmethylated, oku kuthetha ukuba inemiphumo encinci okanye uxinzelelo kwisibindi kunye namalungu omsebenzisi.
I-6-Andro isebenza kakuhle njenge-stacker okanye isetyenziswe nezinye iprohormones zokubhukuda. Ku-700 ukuya kwi-1,000 mg, ufumana umphumo osisayo xa usetyenzisiweyo kumjikelezo omnye. Njengengxenye yecingo, ama-4-Andro amancinci amabala aphakathi kwe-300 ukuya kwi-500 mg.
Kubaqalayo: sebenzisa i-4-Androsterone ye-4 kwiiveki ze-6 kwi-300-500 mg.
Kubasebenzisi bezilwanyana: sebenzisa i-4-Androsterone ye-6 kwiiveki ze-8 kwi-300-750 mg.
I-4-DHEA i powder isebenza njani
Iprohormones iyisisombululo esinokufikeleleka kwimiphumo ephezulu yehomoni. Iprohormones yimixube ethathwa ngomlomo. Iprohormone ithetha ukuba izenzo zakhiweyo ziyi-precursor yehomoni. Ngokwabo, abaphumelelanga. Umsebenzi wabo ukujikeleza ngegazi. Xa iprohormone iguqulelwe kwihomoni, ilawula ama-hormone. Cinga ngeprohormone ngokuba yiprothini eprotheyini eguqulela kwiprotheni ukuphucula ukusebenza kwezemidlalo kunye nempilo ye-muscle. I-4-DHEA powder enye yeprohormone enjalo.
Emva kokupheliswa, i-4-Andro ingena kwigazi lakho kwaye iguqulwa ibe yi-testosterone. Isiqulatho siza kuqala ukuba neendlela ezibonakalayo eziphezulu ze-anabolic, ezibangelwa ubukhulu kunye namandla kunyuke ngelixa ukuphucula i-sex yakho drive-kukunika loo nto "engafanelekanga ye-Alpha Male Ecstasy."
Ukongezelela, lindele ukuba kwezi ziphumo:
Amandla angcono namandla
Ixesha lokubuyisela ngokukhawuleza
Ewe, kufuneka kwi-support support cycle xa uthatha i-4-Andro njengoko kunokuchaphazela uxinzelelo lwegazi. Oku kubalulekile ekukhuthazeni izinga lokunyanga kwegazi.
Ngokufanayo, unyango lwe-post cycle (PCT) luyingxenye ebalulekileyo yomjikelezo njengoko kuya kukunceda ukuba ugcine iziphumo ngelixa unceda umzimba wakho ukubuyisela ukulinganisela kwe-hormonal rhoqo.
Kukho imiphumo emibi efunekayo ukuba uqaphele. I-4-Andro ineempembelelo ezifanayo kunye ne-1-Andro.
Ubungozi bokulahleka kweenwele, i-acne, ukunyuswa kweprotate, ukunyuka kwetestular, ukunyuka kwimizimba kwizitho, uxinzelelo oluphezulu kunye nezinye izinto ezinomdlavuza.
I-LDL yakho (okubi) i-cholesterol iya kunyuka kwaye i-HDL (enhle) i-cholesterol iya kuhla. Akukho nto intliziyo yakho.
Ngandlela-thile, ezi ziphumo zecala ziya kuphelisa iiveki ezimbalwa emva kokuba umjikelezo wakho uphele. Ngoko ke akude ixesha elide.
Yenza ukuba usebenze ngegazi ngaphambi, emva, nangethuba lomjikelezo wakho. Kwakhona ube neyonyango yokuguqulwa ngesandla.
Unokunciphisa le miphumo yecandelo ngokumfutshane nje ukufutshane nokujikeleza ubude bemijikelezo yakho kunye / okanye ukunciphisa umyinge.
I-4-DHEA yePowder Marketing
Ngaba i-4-DHEA ipowder inayo nayiphi na imiphumo yangaphandle
I-4-Andro ineziphumo ezincinane. Unokuhlangabezana nokuguqulwa kwe-estrogen encinci, iincampu ze-muscle, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, ulwaphulo kunye nakwezinye iimeko ze-gynecomastia (gyno).
Indlela yokuthenga i-4-DHEA powder evela kwi-AASraw
I-Fluticasone Powder (90566-53-3)